ALAHADY 30 MAY 2004, PENTEKOSTA
Accueil Ny Mpitandrina Perikopa ALAHADY 30 MAY 2004, PENTEKOSTA
Publication : 8 juin 2004
Perikopa : Asa 2:1-13 ; Rom 8:1-17 ; Jaona 14 : 15-26
" Fa ny Mpananatra, dia ny Fanahy Masina, Izay hirahin’ny Ray amin’ny Anarako, Izy no hampianatra anareo ny zavatra rehetra sy hampahatsiaro anareo ny zavatra rehetra izay nolazaiko taminareo "( Jaona 14:26 ).
Ry havana malala !tahaka ny Fiangonana kristiana manerana ny tany, dia misaotra an’Andriamanitra Rain’i Jesoa Kristy Tompontsika isika fa afaka mankalaza ny fetin’ny Pentekosta koa androany. Ny andro Pentekosta dia anankiray amin’ireo andro lehibe efatra eo amin’ny fivavahana sy ny finoana kristiana : Noely na krismasy, Paska, Fiakarana( Ascension ), Pentekosta. Ireny fankalazana rehetra ireny no manamarina sy manamafy ny fototry ny fivavahana kristiana, na ara-tantara, na ara-pinoana ary samy manana ny zava-mahagaga sy ny hafatra ambarany avy.
Hoy ny teny fikasana nataon’i Jesoa tamin’ny Mpianany hoe : " Fa ny Mpananatra, dia ny Fanahy Masina, Izay hirahin’ny Ray amin’ny Anarako, Izy no hampianatra anareo ny zavatra rehetra sy hampahatsiaro anareo ny zavatra rehetra izay nolazaiko taminareo " ( Jaona 14 :26). Mbola namafisiny ihany io fanambarany io fotoana fohy alohan’ny niakarany ho any an-danitra manao hoe : " Fa hahazo hery ianareo amin’ny hilatsahan’ny Fanahy Masina aminareo, ary ho vavolombeloko any Jerosalema sy eran’i Jodia sy Samaria ary hatramin’ny faran’ny tany "( Asa 1 :8).
Notovina tamin’ny andro Pentekosta ireo teny ireo. Tonga ny Fanahy Masina nitarehin’afo izay nizarazara ka nipetraka tambonin’ny lohan’ny mpianatra tsirairay avy. Niseho tamin’ny fahazoan’ny mpianatra nanao fiteny maro samihafa ny heriny ( Asa 2:1-4).
Moa tsy fahanginana sy tahotra ary tebiteby va no nameno indray ny fon’ny Mpianany raha niala teo amin’i Jesoa ? Tahaka ny ondry tsy misy mpiandry izy ireo. Tsy navelan’i Jesoa ho kamboty tanteraka izy ireo, fa nomeny toky sy fanantenana amin’ny teny mamy sy mahatoky. Koa rehefa nivory tamin’ny toerana iray izy rehetra, ka nivavaka sy niray saina nangataka ny Fanahy Masina , dia tsy diso fanantenana fa tanteraka izany. Tonga Ilay nantenaina. Niposaka ny andro lehibe izay ahazoan’ny tany rehetra nandray ny famonjena nataon’i Jesoa Kristy.
" Fa ny Mpananatra, dia ny Fanahy Masina, Izay hirahin’ny Ray amin’ny Anarako, Izy no hampianatra anareo ny zavatra rehetra sy hampahatsiaro anareo ny zavatra rehetra izay nolazaiko taminareo "( Jaona 14:26). Nofenoin’ny Fanahy Masina ny sain’ny Mpianatra mba hahaizany mamelabelatra tanteraka ny Filazantsaran’ny Famonjen’i Jesoa Kristy. Anarana maro no niantsoana sy nanondron’i Jesoa ny Fanahy Masina. Indraindray dia ataony hoe Fanahin’ny Ray, indraindray lazainy hoe Fanahin’ny Fahamarinana, mbetika antsoiny hoe Mpananatra. Io Fanahin’ny Fahamarinana na Mpananatra na Fanahy Masina io dia naidina avy amin’Andriamanitra Ray be fitia sy famindrampo, tamin’ny alalan’i Jesoa Kristy, hampahazava ny saina sy ny fahalalana ary ny fon’ny olona rehetra, hitondra aina vaovao sy hitarika antsika ho amin’ny fahamasinana , ho tahaka an’Andriamanitra tompointsika sy ivavahantsika Izay Masina isika.
" Hirahin’ny Ray amin’ny Anarako... ".
Ambaran’izany teny izany fa tsy misy afa-tsy Jesoa irery ihany no Mpana-làlana ahazoan’ny mino mandray ny Fahasoavan’Andriamanitra, indrindra fa ny fanomezana ny Fanahy Masina. Ny Fanahy Masina izay miasa ao anatin’ny olona ka hampianatra sy hampahatsiaro azy ny zavatra rehetra, izany hoe ny marina rehetra mikasika ny Famonjena : Izao tontolo izao sy ny olombelona manontolo dia tafiditra amin’ny fandavana sy ny fanalavirana an’Andriamanitra. Te-hampanjaka ny heviny sy ny sainy ary izay sitraky ny fony ny olona. Mandany ny androny amin’ny filan’ny nofo maro samihafa. Miaina sy mivelona ary milona ao anatin’ny faharatsiana sy ny fahotana.Koa ny Fanahy Masina dia mampahatsiaro ny lazain’ny Soratra Masina fa fahafatesana anie no tambin’ny ota.
Ry havana malala, noho ny fitiavan’Andriamanitra, Jesoa Izay tsy nahalala ota dia efa nataony ota nanafaka sy namonjy ny olona amin’ny fanandevozan’ny ota, ary nohamarinina tao Aminy isika. Izany hoe voahombo sy maty teo amin’ny hazo fijaliana ny Zanaka Lahy Tokan’Andriamanitra noho ny fahotantsika olombelona mba hananan’izay rehetra mino Azy fiainana mandrakizay.. Noho izany, nomena ny Fanahy Masina mba hampiseho miharihary ny fahotan’izay mandà an’Andriamanitra Ray sy tsy mino an’i Jeoa Kristy ho Tompo sy Mpamonjy, Loharanon’aina.
Paoly izay anankiray amin’ireo olona niasan’ny Fanahy Masina, dia vavolombelon’ny fahatanterahan’ny fampianarana sy ny fampahatsiarovana ny zavatra rehetra nolazain’i Kristy. Nampianarin’ny Tompo azy teo an-dalamben’i Damaskosy fa Izy Jesoa no Zanaka Lahy Tokan’Andriamanitra, Mpamonjy izao tontolo izao. Nampahatsiarovin’ny Tompo an’i Paoly koa ny fanenjehany Azy sy ny Fiangonany, ary nolazain’ny Tompo taminy fa ny finoana an’i Jesoa Kristy irery ihany no ahitana sy ahazoana famonjena. Niaiky ny fahotany sy ny fahadisoany Paoly ka nambarany ao amin’ny Rom 8:1-17 fa tonga zanak’Andriamanitra izy, ary tsaroany fa notarihan’ny Fanahy Masina izy.Voatafy hery vaovao tamin’ny nidinan’ny Fanahy Masina tao aminy. Nohavaozina ny saina sy ny sitrapo ; voaforona tao am-po ny toetra vaovaon’ny fitiavana.Tonga fantatr’i Paoly fa efa niseho tao aminy ny toetra amam-pomba lazain’ny tenin’Andriamanitra fa hananan’ny olom-boavonjy sy voavela heloka.
Ry havana malala, ny Fanahy Masina Izay hirahin’ny Ray amin’ny Anaran’i Jesoa Kristy no hampianatra sy hampahatsiaro antsika fa efa vita ny asam-pamonjena namboarin’Andriamanitra ho antsika ; ary efa tonga zanak’Andriamanitra isika ka ny herin’ny Fanahy Masina no ahafahantsika miantso Azy hoe : " Aba ! Ray "(Rom 8 :16). Amin’ny fotoana sasany dia mety hotsindrian’ny heloka sy ny fahotana ny fieritreretana ka tonga misalasala na azo vonjena isika na tsia, na efa voavonjy na tsia. Mba nifikitra amin’i Kristy ihany, nefa toa tsy manam-piadanana fa mandry tsy lavo loha. Dia mamirapiratra ao amin’ny maizina ny fahazavan’i Kristy, ka ny fahatsiarovana sy ny fitiavana an’i Jesoa ary ny fahatsiarovana ny fanavotana efa vitany , izay tonga mameno ny fisainana sy manjaka ao am-po no asa ataon’ny Fanahy Masina, ka lazaina amintsika koa.
Mpampianatra sy Mpananatra tsara indrindra no nomen’i Jesoa antsika rehetra izay mino Azy. Tsy ny herintsika na ny saintsika no ahaizantsika mino sy manatona Azy, fa ny Fanahy Masina, Izay niantso antsika amin’ny Filazantsara, sy nanazava antsika tamin’ny fanomezany, ary manamasina sy mihazona antsika amin’ny finoana marina. Ary tsy izany ihany, fa ny Fanahy Masina koa no miantso sy manangona, manazava ary manamasina izay rehetra ao amin’ny Fiangonana, ary miaro azy eo amin’i Jesoa Kristy amin’ny finoana iray marina koa.
Ry havana malala, foana ny fitiavana izay nasehon’Andriamanitra tamin’ny Noely raha tsy misy Paska ; foana ny Paska raha tsy misy ny Fiakaran’i Kristy any an-danitra ; ary foana izany Fiakarany izany raha tsy misy Pentekosta : " fa raha tsy hiala Aho, dia tsy ho avy aty aminareo ny Mpananatra, dia ny Fanahy Masina, Izay hirahin’ny Ray amin’ny Anarako "( Jaona 14).Ny Pentekosta no nahatanterahan’izany teny mahatoky izany. Feno ny Fanahy Masina izay rehetra mino sy mamoa ny varavaran’ny fony ka mangataka Azy, na iza na iza.Ary sambatra izay tsy mandroaka ny Fanahy Masina, fa manome toerana malalaka ao am-pony. Avia Fanahy Masina ô ! Fa miandrandra Anao izahay.Amena.